The Ab Presents Nepal » शास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिको हातमा कहिले पनि पैसा टिक्दैन एक पल्ट हेर्नुहोला!
शास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिको हातमा कहिले पनि पैसा टिक्दैन एक पल्ट हेर्नुहोला!
शास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिको हातमा कहिले पनि पैसा टिक्दैन हेरौ जानिराखौ !
एजेन्सी : सास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिको हातमा कहिले पनि पैसा टिक्दैन जानिराखौ : शास्त्र मा लेखिए अनुसार हाम्रो सारिर मा हुने कोठी को धेरै नै महत्व रहन्छ हामीले जति पैसा कमाएपनि हाम्रो यी अंग हरुमा कोठी छ भने हाम्रो हातमा पैसा टिक्दैन समुन्द्र शास्त्र का अनुसार हाम्रो सरिरमा हुने कोठीहरुले सबै ठाउ ठाउ बाट फरक अर्थ दिई राखेका हुन्छन सबै कोठीहरुको छुट्टाछुट्टै महत्व छ !
कतिपय भागमा हुने कोठी ले हाम्रो जीवनमा धेरै राम्रो फल दिएका हुन्छन भने कतिपय ठाउमा हुने कोठीले नराम्रो फल दिएका हुन्छ ! हाम्रो सारिर को यी भागमा कोठी हुने व्यक्तिहरुको हातमा पैसा टिक्दैन हेर्नुहोस !
यी भागमा कोठी भएका ब्यक्तिको हातमा पैसा अडिन्नः बायाँ गालामा कोठी हुनु खर्चालु हुने लक्षण हो । यस्ता ब्यक्तिको हातमा पैसा परे पनि खर्च भैहाल्छ ।बचत गर्न सक्दैनन् ।तल्लो ओंठमा कोठी छ भने धनको कमी हुन्छ ।
तर उपल्लो ओंठमा कोठी भएका ब्यक्ति भने कामुक हुने समन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ ।बायाँ हत्केलामा कोठी हुनेहरु पनि खर्चालु हुन्छन् । यिनीहरुबाट पैसा बचत हुनु सम्भव छैन ।बायाँ खुट्टामा कोठी हुनु पनि पैसा नटिक्ने संकेत हो ।
यस्ता ब्यक्तिले पैसा बचाउन नसक्ने शास्त्रमा उल्लेख छ ।चोरी औंलामा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले जीवनमा धन अभाव भोग्छन् ।हत्केलामा वृहस्पति पर्वतमा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले पनि धन बचाउन सक्दैनन् । यिनीहरुलाई पैसा हात लागेपनि बचत हुँदैन ।
बायाँ आँखि भौंमा कोठी भएका ब्यक्ति पनि खर्चालु हुन्छन् । उनीहरुले विलासितामा पैसा खर्च गर्ने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख छ ।बायाँ आँखामा कोठी हुनु पनि रोगमा पैसा जाने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिको पैसा उपचारमा बढी खर्च हुन्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस ! यी चार राशि भएका मानिसहरू, जस्लाइ मनै पर्दैन कसैको साथ । जानीराख्नुहोस्
एजेन्सी । सबै १२ राशि एक विशिष्ट राशि तत्व अन्तर्गत पर्दछन् । मानिसका राशि अनुसार उनिहरूको बानी व्यवहार फरक फरक रहेको हुन्छ । मानिसहरूको कुण्डलीमा ग्रह नक्षत्रको सिधै असर पर्छ । जसले गर्दा उनीहरूको जिन्दगी प्रभावित हुन् पुग्छ । यही नक्षत्रको आधारमा नै प्रत्येक मानिसको राशि निश्चित हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूको भविष्य र स्वभावको सङ्केत मिल्ने गर्दछ ।
धेरै मानिसहरूलाई भिडमा बस्न मन पर्छ भने केही यस्ता राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका मानिसहरूलाई भिडमा बस्न मन पर्दैन जो धेरै जसो एक्लै बस्न रुचाउँछन् । जान्नुहोस् ती कुन राशिका मानिसलाई भिडभाड मन पर्दैनः
१. मकर राशि:-मकर राशि भएका मानिसलाई एक्लै बस्न मनपर्छ। यी राशि भएका मानिस अरुसंग घुलमिल हुन त्यति रुचाउदैनन्। किन कि यी मानिसको स्वभाव लजालु हुन्छ। यी राशिका मानिस आफुले पहिलादेखि नै चिनेको व्यक्तिहरुसँग बस्न रुचाउछन्।
२. मिन राशि: एक्लै बस्नु यी राशी भएका व्यक्तिको सबै भन्दा ठुलो बल हो। यिनीहरु दिनमा पनि सपना देख्छन् र आफ्नै दुनियामा हराउछन्।’
३. कर्कट राशि: यी राशि भएका व्यक्तिहरुको थोरै साथी हुन्छन् र उनीहरुसँग नै बस्न मन पराउछन्। कोहि नचिनेको व्यक्ति यिनीहरुको नजिक आए भने यी राशि भएका व्यक्तिले अप्ठ्यारो महशुस गर्छन’।
४. कन्या राशि: यी राशी भएका मानिस लजालु स्वभावका हुन्छन किनकि यो राशिमा ग्रह नक्षत्रको धेरै प्रभाब पर्छ । यिनीहरुलाई आफ्नै दुनियामा मस्त रहन मन पराउछन्। यी राशि भएका व्यक्तिलाई आफ्नो घर बाहेक अन्त बस्न मन पर्दैन ‘। एजेन्सी